चीन 2021 ठूलो इलेक्ट्रिक बाइक 20000w इलेक्ट्रिक स्कूटर वयस्क निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
2021 ठूलो इलेक्ट्रिक बाइक 20000w इलेक्ट्रिक स्कूटर वयस्क
तपाइँ तपाइँको छिटो चम्किलो नयाँ बिजुली स्कूटर मा कदम अघि, तपाइँ जान्नुपर्छ कि मैले तिमीलाई चेतावनी दिएँ - बिजुली स्कूटर खेलौना होइनन्। उनीहरु अति आधुनिक यातायात उपकरणहरु छन् कि छिटो, धेरै छिटो जान सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सधैं सम्मान र सामान्य ज्ञान को एक राम्रो खुराक संग व्यवहार गर्नुपर्छ।
म व्यक्तिगत रूप मा मेरो ई स्कूटर मा अतिरिक्त छिटो जाँदै रोमाञ्चित छैन। मँ जस्तै सवारी को आनन्द लिन्छु। जे होस्, मँ बुझ्दछु कि त्यहाँ मानिसहरु जो एड्रेनालाईन आफ्नो ई स्कूटर मा सुपर छिटो जाने को भीड मनपर्छ।
तिनीहरूको डिजाइन को आधार मा, बिजुली स्कूटरहरु धेरै थोरै, यदि कुनै हो, एक दुर्घटना को स्थिति मा सुरक्षा प्रदान गर्दछ। अत्यधिक गति मा उनीहरुलाई सवारी बस खतरनाक छ। यस कारण को लागी, यदि तपाइँ छिटो बिजुली स्कूटरहरु मध्ये कुनै एक सवारी गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ एक पूर्ण अनुहार हेलमेट, एक क्र्यास ज्याकेट, सुरक्षात्मक प्याड, आदि लगाउनु पर्छ सधैं ट्राफिक नियमहरु पालना गर्नुहोस्।
१ टुक्रा मूल्य: 2235 USD प्रति टुक्रा
10 टुक्रा मूल्य: 2135 USD प्रति टुक्रा
आइटम को नाम सीई संग इलेक्ट्रिक स्कूटर
टायर आकार सडक/बन्द सडक टायर मा ११ इन्च १३ इन्च भ्याकुम टायर
ब्याट्री क्षमता 72V 40Ah (वैकल्पिक को लागी 45Ah) 72V 80Ah (वैकल्पिक को लागी 100Ah)
पाइला धातु पदचिन्ह संग धातु पदचिन्ह+एक्रिलिक पदचिह्न संग
अधिकतम माइलेज लगभग 80-110kms (तेस्रो गियर शर्त मा आधारित एकल मोटर संग परीक्षण गरीएको, सवार को वजन, सडक को अवस्था आदि मा निर्भर गर्दछ ...) लगभग 150KM 80Ah संग (पहिलो गियर को स्थिति मा आधारित एकल मोटर संग परीक्षण गरीयो, सवार को वजन, सडक को स्थिति मा निर्भर गर्दछ
उत्पादन खुल्ला आकार १३8*१३१*c० सेमी 138*143*70 सेमी
उत्पादन Foldalbe आकार १३**३२*५c सेमी 152*37*57 सेमी
रंग रातो विवरण संग कालो
ब्रेक अगाडि र रियर हाइड्रोलिक ब्रेक
भिगोने प्रणाली अगाडि हाइड्रोलिक निलम्बन, रियर वसन्त निलम्बन
अधिकतम गति लगभग 100-145km/घन्टा
अधिकतम लोड लगभग 200kgs
प्रकाश अगाडि दोहोरो रोशनी, पूंछ प्रकाश, ब्रेक प्रकाश, बायाँ/दायाँ संकेत घुमाउनुहोस्
चढाई कोण 55 डिग्री
भारी वयस्क एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी गर्न सक्नुहुन्छ?
बिजुली स्कूटर को लोकप्रियता मा जबरदस्त बृद्धि संग, मानिसहरु को बढ्दो संख्या दैनिक यात्रा को लागी र काम बाट उनीहरुलाई प्रयोग गर्ने सोचमा छन्। अन्य जो आफ्नो जीवनशैली को लागी यस्तो कठोर परिवर्तन को लागी तयार नहुन सक्छन् किराना पसल को लागी छोटो यात्राहरु को लागी वा एक सामयिक सादा, सरल रमाईलो को लागी एक ई-स्कूटर को उपयोग को बारे मा सोच्न सक्छन्।
त्यहाँ बनाउँछ र इलेक्ट्रिक स्कूटर को मोडेल आज बजार मा उपलब्ध छन्। उनीहरु मध्ये धेरै भारी वयस्कहरु लाई पूरा गर्दछ, यस प्रकार उनीहरुलाई यातायात को एक नयाँ मोड मा स्विच गर्ने विकल्प छ कि हालैका बर्षहरुमा धेरै लोकप्रिय भएको छ।
इलेक्ट्रिक स्कूटर सबैको लागि उपलब्ध छन्: बच्चाहरु, किशोर र लगभग सबै आकार को वयस्क।
यदि तपाइँ औसत आकार भन्दा ठूलो को एक वयस्क हुन, तपाइँ पनि एड्रेनालाईन र एक ई स्कूटर सवारी को शुद्ध आनन्द को आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाइँ एक मा हप गर्नु भन्दा पहिले, त्यहाँ केहि चीजहरु लाई पहिले विचार गर्न को लागी छन्।
एक भारी शुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर पाउनुहोस्
क्रम मा तपाइँ एक सुरक्षित र रमाईलो सवारी गर्न को लागी, स्कूटर तपाइँ सवारी गर्दै हुनुहुन्छ पर्याप्त शक्तिशाली तपाइँको वजन बोक्न को लागी। सबै निर्माताहरु प्रमुख रूपमा आफ्नो ई स्कूटर को लोड क्षमता प्रदर्शन। जे होस् केहि भारी बोझ को लागी शरीर को फ्रेम प्रबलित हुन सक्छ, यो वास्तव मा मोटर को शक्ति र ब्याट्री को शक्ति यो शक्ति को लागी तल आउँछ।
चीजहरु एक भारी शुल्क ई स्कूटर मा हेर्न को लागी
सबै व्यावहारिक प्रयोजनहरु को लागी, मोटर को शक्ति र ब्याट्री को क्षमता दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरु जब एक भारी वयस्क को लागी एक बिजुली स्कूटर किन्ने विचार गर्न को लागी हो।
मोटर: यद्यपि केहि भारी शुल्क ई स्कूटरहरु धेरै शक्तिशाली मोटर्स (१५,००० वाट वा अधिक) संग आउँछ, सबै व्यावहारिक प्रयोजनहरु को लागी ३५० वा ५०० वाट पावर को एक न्यूनतम संग एक इलेक्ट्रिक मोटर धेरै भारी व्यक्तिहरु को लागी पर्याप्त भन्दा बढी हुनु पर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा १०० पाउन्ड तौल भएका मानिसहरु लाई जान्दछु जो नियमित रूप बाट ३५० वाट Xiaomi M365 मा कुनै समस्या बिना कुनै यात्रा गर्दछन्। स्कूटर राम्रो त्वरण, गति र यात्रा को दायरा कायम राख्छ। म विशेष गरी यो एक नोट बनाइरहेको छु ताकि कुनै पनी भारी वयस्कहरु यो पढ्दै बजार मा सबैभन्दा शक्तिशाली बिजुली स्कूटर प्राप्त गर्न फिक्स्ड छैन - मेरो विचार मा, त्यहाँ कुनै आवश्यकता छैन। जाहिर छ ३५० वा ५०० वाट सानो लाग्नेछ जब १५,००० वाटको मोटरको तुलनामा, तर तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ कि दुई 00५०० वाट मोटर्सले मात्र राम्रो काम गर्दछ, भले पनि सवार एक भारी पक्षमा अलिकति हो। बस याद गर्नुहोस् कि एक अधिक शक्तिशाली मोटर अधिक ऊर्जा को उपभोग गर्दछ र एक छोटो दायरा को लागी हुन्छ, भले ही एक अतिरिक्त शक्तिशाली ब्याट्री संग सुसज्जित छ। पत्ता लगाउनुहोस् कसरी तपाइँको ई स्कूटर को दायरा बढाउन को लागी।
ब्याट्री: एक उच्च शक्ति संचालित बिजुली मोटर एक कम संचालित एक भन्दा, अधिक शक्ति खपत हुनेछ। यस कारण को लागी एक उच्च क्षमता लिथियम आयन ब्याट्री सिफारिश गरीएको छ। सौभाग्य देखि, धेरै निर्माताहरु राम्रो संग यो स्पष्ट संघ को बारे मा जान्दछन् र सामान्यतया कुनै पनी बिजुली मोटर को लागी एक ठीक आकारको ब्याट्री स्थापना गर्नुहोस्। तर, तपाइँ सधैं किन्नु अघि डबल जाँच गर्नुपर्छ।
टायर: एक विशिष्ट मोडेल मा निर्भर गर्दछ, बिजुली स्कूटर या त हावा भरिएको वा ठोस रबर टायर संग आउँछ। हामी मध्ये धेरै को लागी, मँ भन्न चाहन्छु कि यो फरक पर्दैन कि प्रकार टायर हो। केवल तथ्यलाई विचार गर्नुहोस् कि हावा भरिएको टायर एक चिकनी सवारी दिन्छन् (म व्यक्तिगत रूपमा सोच्दिन कि फरक छ कि ठूलो छ, तर धेरैजसो मानिसहरु सोच्दछन् कि लाग्छ, त्यसैले मानौं कि यो सत्य हो)। हावाले भरिएको टायर, अर्कोतर्फ, पंचर को लागी अधिक प्रवण छन्। यस कारण को लागी, धेरै भारी वयस्कहरु लाई शायद एक ठोस टायर को जोखिम लाई कम गर्न को लागी ठोस रबर टायर तिर हिड्नु पर्छ, खास गरी यदि उनीहरु असमान भूभाग मा स्कूटर सवारी गर्ने योजना बनाउँछन्। एक भारी लोड र दबाव मा एक अचानक स्पाइक को अधीनमा टायर, जस्तै जब गड्ढा मा सवारी, फट्न सक्छ।
ब्रेक: एक स्पष्ट सुरक्षा सुविधा। अधिकांश भाग को लागी ब्रेक राम्रो संग डिजाइन गरीएको छ र धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरु संग कुनै समस्या छैन। सुरक्षा कारणहरु को लागी, ठूला वयस्कहरु जो एक अधिक शक्तिशाली मोटर संग एक ई स्कूटर को सवारी को लागी छनौट गर्नु पर्छ दोहरी ब्रेक संग एक मोडेल छान्नु पर्छ।
Handlebars: यदि तपाइँ एक भारी र अग्लो व्यक्ति हो, ध्यान राख्नुहोस् कि केहि ई-स्कूटरहरु गैर समायोज्य स्टीयरिंग ह्यान्डल उचाई छ। यस अवस्थामा, म सिफारिश गर्दछु कि तपाइँ व्यक्तिगत रूप मा पहिले ई स्कूटर को कोशिश, किन्नु भन्दा पहिले। एक ह्यान्डलबार कि राम्रो संग तपाइँको हतियार को स्थिति को लागी समायोजित छैन तपाइँ थकित र तपाइँको सवारी असुरक्षित र निश्चित रूप मा रमाईलो छैन।
अन्तमा, एक विशिष्ट मोडेल किन्नु अघि, भूभाग को प्रकार को बारे मा सोच्न को लागी तपाइँ ई-स्कूटर धेरै प्रयोग गरीरहनु भएको छ। यदि तपाइँको कम्युट को अधिकांश चिकनी शहर को सडकहरु मा शामिल हुनेछ, तब ई स्कूटर मोडेल को विशाल बहुमत तपाइँको आवश्यकताहरु लाई फिट हुनेछ। जे होस्, यदि तपाइँ धेरै समय बिताउने योजनामा ​​स्कूटर अफ रोड सवारी, तब तपाइँ एक भारी शुल्क मोडेल को लागी देखीनु पर्छ कि अफ रोड उपयोग को लागी डिजाइन गरीएको छ। यी स्कूटरहरु सामान्यतया एक sturdier फ्रेम, चौडा आधार, दोहोरो ब्रेक र अफ रोड टायर हुनेछ।
सबैभन्दा छिटो इलेक्ट्रिक स्कूटर
इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु अब केहि बर्षहरु को लागी चारैतिर रहेको छ, मुख्य रूप बाट सवारी साधनहरु लाई छिटो "अन्तिम केहि माइल यात्रा" को लागी आम जनता को लागी भाडामा उपलब्ध उपकरणहरु को रूप मा।
सवारी शेयर बजार मा आफ्नो लोकप्रियता बढ्दो रहन्छ, तेसैले आफ्नो निजी उपयोग को लागी एक किन्न रुचि राख्ने मानिसहरुको संख्या गर्दछ। मानिसहरु उनीहरुलाई विभिन्न कारणले किन्न चाहन्छन्। कोहि उनीहरुलाई चाहन्छन् किनकी उनीहरु एक अपेक्षाकृत पर्यावरण को अनुकूल यातायात को मोड हो, अरुहरु लाई आफ्नो कम्पैक्ट आकार जस्तै, अरुले उनीहरुलाई एक छिटो सवारी को रोमाञ्च को लागी किन्छन्।
यदि गति एक इलेक्ट्रिक स्कूटर किन्न को लागी तपाइँको मुख्य निर्णय कारक हो, तब पढ्न जारी राख्नुहोस्।
कुन इलेक्ट्रिक स्कूटर सब भन्दा छिटो छ?
K20 सब भन्दा छिटो इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु को एक बजार मा आज उपलब्ध स्कूटर हो। ध्यान राख्नुहोस् कि प्रकाशित "अधिकतम गति" मानहरु निर्माताहरु द्वारा प्रदान आधिकारिक मूल्यहरु हुन्। यी सामान्यतया सबै भन्दा इष्टतम परिस्थितिहरु मा रेकर्ड गरीन्छ, जस्तै सवार वजन, स्तर सतह, र बाहिर तापमान।
· हाम्रो सेवा दर्शन प्रत्येक एकल ग्राहक लाई सन्तुष्ट गर्न र दीर्घकालीन व्यापार साझेदारी निर्माण गर्न को लागी हो
· हामी विराम चिह्न र ग्यारेन्टी उत्पादन गुणस्तर द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त
· हामी विभिन्न आदेश समाधान संग न्यूनतम आदेश मात्रा (MOQ) को विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछौं
· Haibadz टीम सधैं तपाइँको ग्राहकहरु लाई अनुकूलित उत्पादनहरु को लक्ष्यहरु र लक्ष्यहरु लाई पूरा गर्न को लागी OEM ग्राहकहरु लाई समर्थन गर्न को लागी उपलब्ध छ।
प्याकि &्ग र डेलिभरी
१. समुद्री ढुवानी:
प्याकेज: बुलबुला झोला+EPE फोम+भित्री बक्स+बाहिरी7तह नालीदार डिब्बाहरु
-एक गत्ते का डिब्बा को लागी एक टुक्रा
२. एक्सप्रेस / हावा वितरण:
-बबल झोला+EPE फोम+भित्री बक्स+बाहिरी7तह नालीदार डिब्बा+काठ फ्रेम समर्थन
-1 टुक्रा एक गत्ते का डिब्बा, काठको फ्रेम समर्थन को लागी
३. रेलवे यातायात:
प्याकेज पनि ग्राहक को आवश्यकताहरु द्वारा बनाईएको हुन सक्छ।
कृपया हामीलाई सूचित गर्नुहोस् यदि तपाइँलाई विशेष प्याकेजि need्ग चाहिन्छ।
भारी वयस्क सवारहरु को लागी ई स्कूटर सुरक्षा
इलेक्ट्रिक स्कूटर व्यावहारिक र सबै आकार को वयस्कों को लागी यातायात को रमाईलो साधन हुन सक्छ। भन्न को लागी, सबै सवारहरु लाई सामान्य सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्छ जबकि उनीहरुको ई स्कूटर सवारी।
यो स्पष्ट हुन सक्छ, तर यहाँ सामान्य सुरक्षा सावधानी को एक सानो अनुस्मारक हो:
सधैं हेल्मेट लगाउनुहोस्।
सुरक्षात्मक गियर लगाउनुहोस्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको जुत्ता राम्रो संग फिट र बन्द औंलाहरु संग छन्। यो ई स्कूटर को आधार संग एक सुरक्षित पकड सुनिश्चित गर्नेछ।
पैदल यात्रीहरु र तपाइँको वरपर सवारी साधनहरु को बारे मा सजग रहनुहोस्।
सँधै स्थानीय ट्राफिक कानून र नियमहरुको पालना गर्नुहोस्।
एक ई स्कूटर सवारी गर्दा आफ्नो हेडफोन मा संगीत सुन्नुहोस्।
यात्रा मा अतिरिक्त सवार नलिनुहोस्। धेरै ई स्कूटर एकल व्यक्ति को उपयोग को लागी डिजाइन गरीएको हो।
अल्कोहल वा लागुऔषधको प्रभावमा हुँदा कहिल्यै बिजुली स्कूटर नचलाउनुहोस्।
ठूला वयस्क सवारहरु अतिरिक्त निम्न मा विचार गर्नुपर्छ:
ठूला बाधाहरु मा सवारी, जो शाखाहरु, चट्टानहरु वा कर्ब्सहरु बाट बच्न।
खाडलहरुमा सवारी नगर्नुहोस्।
अचानक पालो बनाउन बाट बच्न।
तपाइँको ब्रेकि दूरी को ध्यान दिनुहोस्।
ध्यान दिनुहोस् कि अधिक शक्तिशाली मोटर को बावजुद, एक भारी भार संग एक भारी शुल्क ई-स्कूटर को त्वरण एक मानक ई-स्कूटर को रूप मा छिटो हुन सक्दैन।
अन्य (यति स्पष्ट छैन) कारकहरु लाई विचार गर्न को लागी:
व्यक्तिगत शारीरिक क्षमता
तपाइँको शरीर मास के हो? तपाइँको शरीर को वर्तमान सामान्य स्थिति के हो? के तपाइँ विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तपाइँको हड्डीहरु, मांसपेशिहरु र जोर्नीहरु तपाइँ निराश हुनुहुन्न यदि तपाइँ एक छिटो जम्प वा अचानक पालो बनाउन को लागी आवश्यक छ? धेरै भारी वयस्कहरु लाई कुनै समस्या छैन आफ्नो शारीरिक चपलता को सीमा परीक्षण। केहि, जे होस्, यो गर्न को लागी असमर्थ हुन सक्छ सम्बद्ध चिकित्सा अवस्थाहरु को कारणले गर्दा। यदि त्यो तपाइँको मामला हो, तब तपाइँ दृढतापूर्वक सबै जोखिम र एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी संग सम्बन्धित लाभहरु लाई विचार गर्नु पर्छ, एक सवारी गर्नु भन्दा पहिले।
तपाइँको तौल र कुनै पनी चिकित्सा अवस्थाहरु बाट तपाइँ पीडित हुन सक्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ, यो तपाइँको लाभ को लागी तपाइँको डाक्टर संग परामर्श गर्न को लागी तपाइँ एक ई स्कूटर मा तपाइँको पहिलो यात्रा लिनु अघि हुन सक्छ।
धेरै हदसम्म अधिक वजन वा मोटो व्यक्तिहरु सह-रोग चिकित्सा अवस्थाहरु छन्। यदि तपाइँ कुनै पुरानो चिकित्सा अवस्था बाट पीडित हुनुहुन्छ, तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस्, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक चिकित्सा निकासी छ। उदाहरण को लागी, केहि विकारहरु जसले उच्च शरीर मास को लागी नेतृत्व गर्दछ, हड्डी भंग को जोखिम को साथ जोडिएको हुन सक्छ। बुझ्न को लागी, कमजोर हड्डीहरु संग व्यक्तिहरु लाई दृढता संग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवारी को जोखिम र परिणामहरु लाई विचार गर्न सक्छ।
इलेक्ट्रिक स्कूटर रमाईलो, व्यावहारिक र अपेक्षाकृत पर्यावरण मैत्री छन्। हरेक वयस्क, ठुलो वा सानो, जो एक भारी शुल्क ई स्कूटर किन्न मा रुचि राख्छन् एक पाउन को लागी कि उनीहरुको आवश्यकताहरु लाई सबै भन्दा राम्रो फिट गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। त्यहाँ कुनै वास्तविक बाध्यकारी कारण किन भारी वयस्क ई स्कूटर सवारी बाट हतोत्साहित हुनु पर्छ।
सडक मा आफ्नो आँखा राख्नुहोस्, सुरक्षा गियर लगाउन र रमाईलो छ!
अघिल्लो: स्कूटर इलेक्ट्रिक 13 इन्च 72v-84V 20000W इलेक्ट्रिक स्कूटर
अर्को: एलजी लिथियम ब्याट्री इलेक्ट्रिक स्कूटर १३ इन्च बिजुली स्कूटर वयस्क
स्कूटर इलेक्ट्रिक बन्द सडक ， गतिशीलता स्कूटर ， Eletric स्कूटर
१३ इन्च एल्युमिनियम trotinette electrique patinete ...
चिनियाँ 20000w 72V 80Ahour elertric मोटरसाइकल ...
२ पाels्ग्रा संचालित स्मार्ट बहाव आत्म सन्तुलन el ...
OEM 15000w-20000w बिजुली स्कूटर bicicleta 1 ...
72v उच्च अन्त इलेक्ट्रिक स्कूटर 15000w 13inch sco ...
2021 सबैभन्दा राम्रो मूल्य नवीनतम चीन 13inch 84v 20000w ...